नेपाल आज | रवि लामिछानेकी पूर्वपत्नीको करुण पुकारः मलाई २५ वर्ष धोकामा राखियो
अनि रविले लेख फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस...
शुक्रबार, २० पुष २०७५ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रमका चर्चित प्रस्तोता रवि लामिछानेले पत्नी इशा लामिछानेलाई परित्याग गरेर फिल्म निर्माता उद्धव पौड्यालकी छोरी निकिता पौड्यालसँग विवाह गर्ने विषयले बजार तातेको छ ।
बेथिति र सामाजका कर्तुतका विरुद्ध चर्को आवाज वकल्ने रवि लामिछानेले फेसबुक स्ट्याट लेखका छन ’श्रीमान, म जिउँदे छु’। लामो स्ट्याटसको सुरूमै उनले ’आफूले नचाहँदानचाहँदै व्यक्तिगत जीवनका बारेमा लेख्नु परेको’ भनेका छन्। रवी जो सामाजिक पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल छाइरहेका छन् । ताजा विषयमा पेचिला कुरा गर्ने र कर्तुत गर्नेलाई आछुआछु पार्ने व्यक्तिले आज किन यस्तो स्ट्याटस लेख्दै छन् ? पक्कै पनि सबैको चासोको विषय नै बन्ला। अझ उनले आफ्नो व्यक्तिग जो कुरा गरेका छन् । तर उनी किन लेख्न बाध्य भएता यति लामो स्ट्याटस। अझ त्यो पनि आफ्नै बारेमा ।
त्यसअघि उनको बारेमा पत्रकार रामकुमार एलानले लिखिएको एउटा स्ट्यासले ध्यान तान्छ। उनले आफ्नो वालमा ’टेलिभिजन देउता’ उपनाम दिँदै लेख्छन्, ’अमेरिकामा रहेका पत्नी र छोरा बिचल्ली पार्दै नेपालमा फिल्मवालीको छोरीसँग इन्गेजमेन्ट’ तीन करोड नेपालीका भगवान् भनेर रवीका नाममा थुप्रै फेसबुक ग्रुप र पेजहरू क्रियट भएका छन् । त्यसैले पनि उनको संकेत रवी तर्फ नै हो भन्ने बुझिन्छ ।
रवी अर्थात् ’सिधा कुरा जनतासँग’ प्रशारणसँगै तीन करोड नेपालीको अपार माया पाएका व्यक्ति, चासो बढ्दै छ । किनकि यस्तो व्यक्तिले आफ्नै परिवारलाई धोका देला त? उनले स्ट्याटस लेख्नु अगाडि पूर्वपत्नी इशाका बारेमा यस्तो समाचार सार्वजनिक भएको छ।
“नमस्कार म ईशा लामिछाने, रवि लामिछानेको पुर्वपत्नी ।” म्यासेन्जरको आवाजसंगैको म्यासेज थियो । परिचयसहित रिप्लाई नहुँदै ईशाको म्यासेज आयो, “मसंग रविका बारेमा केही भन्नुछ तपार्इंले मिडियामा छापेर सहयोग गरीदिनुहुन्छ भने ।”
ईशासंग केहीदिनदेखी उनको समस्या र पिडाबारे कुरा चलीरहेको थियो । लेख लेख्नु अघिल्लो रात ईशाले माईतीमा रविले टर्चर दिन थालेकोे सुनाईन । “मेरो दाईलाई र परिवारलाई टर्चर दिएको छ, मैले मिडियामा बोल्न थालेँ भनेर ।”
रविले आफूलाई पाइलै पिच्छे लडाउन खोजिएको, देश निकाल गर्ने प्रयास गरिएको तर त्यसमा असफल भएपछि केही व्यक्ति नियोजित ढंगबाट आफ्नो जीवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको भन्दै लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। यस्तो छ रविको जवाफः
नचाहदा नचाहदैपनि आफ्नो ब्यक्तीगत कुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो निजी जीवनतर्फ ’मलाई पाइलै पिच्छे लडाउने, देशबाटै निकाला गर्नेलगायतका प्रयास विफल भएपछि अब मेरो निजी जीवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुँदै रहेछ। लामो समयसम्म बैचारिक लडाइँलड्दै अलग अलग बसेको र पछि कानुनी रुपमा नै अलग भएको मेरो वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर ठूलै खोजी चालिरहेको थाहा पाएपछि आफ्नो नितान्त निजी जीवन बारेलेख्न बाध्य भएको छु। मेरी पूर्व पत्नीलाई प्रयोग गरी मेरो वास्तविक रूप अर्कै हो भन्ने प्रमाणित गर्न दिन रात लाग्नु हुने साथीहरूलाई मैले पहिला पनि भनेकै थिए कि टाईम खर्च गर्नै पर्दैन, सिधै मलाई सोध्नुहोस, मै बताइदिन्छु सबै कुरा। मलाई खोक्रो आदर्श र झुठो जिन्दगी बाच्नु छैन र म त्यति आदर्शवान मानिस पनि होइन। मैले करिब २४ वर्ष अगाडि सानै उमेरमा बिवाह गरेको थिएँ र हालसालै मेरो सम्बन्ध बिच्छेद पनि भइसकेको छ।
तर वर्षौंसम्म मतभेद, अलग बसाइँ र बोलचालसमेत नभएपछि राजीखुशीले आफ्ना सबै अधिकार लिएर मसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी पूर्व पत्नीले आफू मबाट अन्यायमा परेको र मेरो कर्तुत सार्वजनिक गर्नु पर्‍यो भनेर केही पत्रकारलाई सम्झिछ्न्। लगभग २४ वर्षअघि भएको विवाहमा आएका अनेकौँ घुम्तीलाई बजारमा लिलाम गर्ने उनको मनशाय आफ्नै मगजको उपज हो वा कसैबाट प्रयोजित हो त्यो म जन्दिनँ तर कसै कसैले ’रवीको कर्तुत’ वा ’रवीको असलीरुप’ जस्ता शीर्षक ’रेडि टु पब्लिस’ अवस्थामा राखेको थाहा पाएकोले उहाँहरु सबैको काम सजिलो पार्दै म आफैँ आफ्ना कर्तुतहरू कबुल गर्दैछु।
अमेरिका मै छँदा म परिवारभन्दा अलग बस्ने गर्थें। सम्बन्ध सुधार गर्ने मेरो बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि म एक विदेशी प्रेमिकासँग पनि बसेको थिए। ६र७ वर्ष पुरानो यो घटनाको कारण उजागर गरेर म मेरा सन्तानको प्रतिष्ठामा ठेस पुर्‍याउन चाहन्न। मलाई त ब्यक्तिगत विषयमा एक शब्द पनि बोल्न मन थिएन। र सम्भावतः यो मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम स्तरहीन टिप्पणी वा क्तबतगक हुनेछ। हेडलाइन नै हेरेर धारणा बनाउनेहरुले मलाई एक मिनेटमा नै ठूलै अपराधी बनाउने छन्। मान्छे दुनियाँसँग लड्न सक्छ तर आफन्तसँग सक्दैन। अमेरिका मै रहँदा अलग बसेका हामी विगत १० वर्षदेखि नै अलग छौँ। कारण र घटना एउटा होइन अनेक छ्न्। जति छ्न् ती अत्यन्तै लाज मर्दा छन्। ती विदेशी मुलकी पूर्वप्रेमिका र मेरो बीचमा एक सन्तान पनि छ। यति कुरा थाहा पाएर बाहिर ल्याउन न्वारन देखिको बल लाउनै पर्दैन। तर उनको र मेरो बाटो अलग भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। हाम्रो सम्बन्ध लामो समय टिकेन। सबैको भाग्यमा माया र परिवार सुख लेखिएको हुदैन रहेछ।
दुनियाँको घर मिलाउने मैले आफ्नो घर मिलाउने प्रयासमा के के मात्रै गरिन होला र। तर उनले हेर्दा मैले र मैले हेर्दा उनले बारम्बार आफ्नो त्यही गल्तीलाई निरन्तरता दियौ जुन गल्तीले सारा घटनाहरु घटे र हाम्रो बिवाह भएको वर्षहरु त बढे तर सम्बन्ध कहिलेपनि अघि बढेन। ज्यादै अप्रिय बिगतलाई टुंगोमा पुर्याउने अन्तिम उपाय कानुनी उपचार नै हो र हामिले वर्षौको अशान्ति र असन्तोषलाई सहमति मै टुंगोमा पुर्यायौ, परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा, कानुन ब्यवसायीहरुको मद्दतमा, उनले भनेका हरेक शर्तहरुको पुरै पालना गरेर। ईजलासमा प्रस्तुत सम्बन्ध बिच्छेदको मिलापत्र हेर्दै न्यायाधीश श्रीमानले सोध्नुभयो, सबै कुरा आफ्नी श्रीमतीलाई दिनु भएछ, सन्तानको जिम्मापनि आफैले लिनु भएछ, अमेरिकामा उहाँहरु बस्ने घर र उहाँहरुको खर्चपनि तपाईं कै जिम्मामा लगाईएछ। अब तपाईं सङ के बाकी छ तरु मैले जवाफ दिएको थिए, श्रीमान म जीउँदै छु।
कुनै पत्रकारलाई म्यासेजमार्फत् मेरि पूर्व पत्नीले मलाई परिवारलाई रुवाएर भागेर नेपाल गएको भनेर लेखिएको र मेरो वास्तविक रुप देखिए जस्तो नभएको भनी लेखेर पठाएको थाहा पाएँ। बिहानैदेखि केही पत्रकारहरुको फोन आउन शुरु भएको छ। उनको म्यासेज कुनै पनि समयमा सार्वजनिक हुने क्रममा छ। जीवनमा भएका घटनाहरु मात्र बताएर अतीतका कथा कहाँ पूरा हुन्छ्न र।अनेकौ घटना बिच २४ वर्ष बितेका हुन जसलाई खोतल्दा सन्तानको मानसिकतामा असर गर्दछ। पछिल्ला वर्षहरुमा पुर्व पत्नी सङ बोल चाल समेत नभएको अवस्थामा मैले एक्लै बस्ने वा उठेर फेरि हिड्ने भन्ने निर्णय गर्नु नै थियो। बाहिर को वाह वाही तर घर भित्रको एक्लोपनले म कयौ पटक बिरामी परे र झण्डै डिप्रेशन को शिकार नै भएको थिए। माया र बिश्वास बर्षौ सम्म मरेको सम्बन्धलाई सहमतिमा र अदालतबाटै टुंगो लगाएर गए पछि उनलाई मैले छ्ल गरेको कसरी लागेछ,म बुझ्न सकिरहेको छैन।अब मसङ बाकी रहेको थोरै नाम र इज्जत छ। त्यस्मापनि आँखा लागेछ।
त्यसैले, आज त्यो पनि दिन चाहन्छु। मेरो ’नकाब’ उतार्न र आफ्ना कर्तुतहरु सर्वजनिक गरि मलाई सिध्याउन लागि पर्ने मित्रहरूलाई र पुर्व पत्नीलाई म आफै खुलेर सहयोग गर्न चाहन्छु। मन परेको हेडलाईन हालेर स्वाद अनुसारको मसला मोलेर पस्क्नुहोला। यति मै मेरा कर्तुतहरु सकिदैनन, बाकी सुन्न रिपोर्टर खटाउनै पर्दैन मै खुलासा गरिदिउला। दुर्गममा परिवारको बिचल्ली पारेर मानिस युरोप अमेरिका भागेका छन, मैले आफ्नी पुर्व पत्नी सहित, आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका जस्तो देशमा (उनीहरु नेपाल आउन नमानेपछि) आफू नेपाल बसेर, सम्पूर्ण आफ्नो जायजेथा सुम्पेर, अझै अमेरिका बस्दाको पूरै ब्यवस्थापन यतिबेला सम्मपनि गर्दै आएको छु।
अदालतमा न्यायाधीशका सामुन्ने राजीखुशीले, मसँग भएको र शायद भविष्यमा समेत हुन सक्ने सबै लिएर आफ्ना वकिल र उनका आफ्ना परिवारका सदस्यको रहोबरमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेर अमेरिका गएकी उनलाई के अन्याय भो मैले बुझिन।अब म बर्षौको एक्लो जीवन र असफल सम्बन्धहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बड्न चाहन्छु। कसैमाथी अन्याय नगरी म आफू माथीपनि न्याय गर्न चाहन्छु।म भागेको छैन, प्रत्येक मंगलबार, बिहीबार र शनिबार राति ८ः४५ मा न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष आउछु।भोलि रातिपनि आउदैछु। सदाझै उहीँ जोश, उहीँ उमंगका साथ। श्रीमान्, म जीउँदै छु ।
तस्बिर : इशा लामिछानेको फेसबुक वालबाट